Xafiiska Xeer Illaalinta Guud ee Somaliland – XXIGS
Qaab dhismeedka XXIGS
Waaxda Maamulka iyo Xisabaadka
Waaxda Adeega Sharciga
Waaxda Caruurta iyo Dumarka
Xafiiska Xeer Illaalinta Guud Inaanu siino dadka iyo dawladaba adeeg hufan oo dacwad oogiseed iyo sharciba si kor loogu qaado saraynta sharciga iyo illaalinta xuquuqda dadka. Sii Akhri Xafiiska Xeer Illaalinta Guud Inaanu siino dadka iyo dawladaba adeeg hufan oo dacwad oogiseed iyo sharciba si kor loogu qaado saraynta sharciga iyo illaalinta xuquuqda dadka. Sii Akhri Xafiiska Xeer Illaalinta Guud Inaanu siino dadka iyo dawladaba adeeg hufan oo dacwad oogiseed iyo sharciba si kor loogu qaado saraynta sharciga iyo illaalinta xuquuqda dadka. Sii Akhri
Oogista dacwadaha ciqaabta ah e ay dhibanaha ay ka yihiin qaranka iyo shicibkuba
Xafiiska Xeer Illaalinta
Maamulka Xeer Illaaliyaha Guud
Qodobada 103aad iyo 107 aad ee dastuurka jamhuuriyada Somaliland waxay si guud u shegayaan in xafiiska Xeer illaalintu (Prucuracy) ka kooban yahay Xeer Illaaliyaha iyo ku xigeenadiisa.sidoo kale Qodobka 99aad,waxa u shegayaa in Garsoorku ka koobanyahay Xeer Illaalinta iyo Maxkamadaha.
Waaxdani waxay kaydisa sidoo kalena u kala qaybisaa dacwadaha heerka rafaanka ah.
Wadanani waxay qorta Xeerka qabyo qoraalka ah tobobarad iyo diwaan galinta
Waaxda Caruurta iyo Dumark
Waaxdani waxay ka shaqaysa dabagalka iyo qaybinta dacwadaha ciyaalka
Waaxdani waxay maamushaq xisabaadka iyo shaqaaqlaha Xafiiska Xeer Illaalinta
Tababaradda iyo Maktabadda Xafiiska Xeer Illaalinta Guud
The role of this center is to promote effective prosecutors training, it also strategically positioned to play supporting role in the judicial reform of the judiciary specially prosecutors in this contemporary era.
Xeer ilaalinta guud ee qaran-ka JSL. Waxay dacwado ciqaab ah kula galeen maxkamadda sare Gobolada bariga Jsl.
Xeer ilaaliyaha guud ee qaran-ka jsl. oo tabobar usoo xidhay Maanta,12 Xeer ilaaliye ku xigeen..
Tabobar socon doona Muddo 5 Cisho ah.
Doorka shaqo ee uugu muhiimsan ee xafiiskani waa oogista dacwadaha ciqaabta ah e ay dhibanaha ay ka yihiin qaranka iyo shicibkuba.waxaanay Xeer illaaliyaha ama ku xigeenadiisuba maxkamada horteeda ka matalaan dadka ama dawladaba dhamaan dacwadaha ciqaabta ah.